AMISOM oo soo bandhigtey hub u kaydasanaa Shabaab oo ay qabteen (Sawiro) – SBC
AMISOM oo soo bandhigtey hub u kaydasanaa Shabaab oo ay qabteen (Sawiro)
Posted by editor on Agoosto 14, 2011 Comments
Taliska ciidamada AMISOM ee magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigay hub ay sheegeen in uu ahaa keyd ay qarsadeen kooxda Al-Shabaab ee dhawaan shaacisey inay ka baxdey magaalada Muqdisho.
Afhayeenka ciidamada AMISOM Pandy Akunda oo soo saartey warasaxaafadeed la soo gaarsiiyey SBC nuqul ka mid ah ayuu ku sheegay in hubkaasi uu ka koobnaa 137 gantaal oo sida uu sheegay Shabaabku u adeegsan jireen waxyaabaha qarxa & waliba weerarada Isqarxinta ah.
Hubkan ayaa laga soo faagey dhulka waxaana uu ku aasnaa guri ku yaal suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, iyadoo wararku sheegayaan in hubkaasi ay u ku soo wargaliyeen taliska AMISOM & ciidamada dawlada KMG qaar ka mid ah dadka ka xoogsada suuqa Bakaaraha oo ka warhayey xiligii hubkaasi la aasayey.
“Al-Shabaab waxay keydsadeen Hub aad u fara badan iyo rasaas”ayuu yiri Paddy Ankunda oo intaa raaciyay in Ciidamada AMISOM ay ka shaqeynayaan sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka.
Paddy Ankunda ayaa sidoo kale sheegay in Al-Shabaab ay jiraan Hub fara badan oo ay magaalada ku qarsadeen iyo waxyaabaha qarxa oo ay ku aastay meelihii ay baneeyeen, isagoo sheegay inay sii wadayaan baaritaanada.
Dhinaca kalena quburo ajanabi ah oo sida wararku sheegayaan u dhashay Mareykanka & wadamo Yurub ka tirsan ayaa la sheegay inay ku gacan siinayaan ciidamada AMISOM & kuwa dawlada KMG soo saarida miinooyinka & waxyaabaha qarxa oo ay ku aaseen kooxda Al-Shabaab qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho gaar ahaan goobihii ay ka baxeen.